आफ्नै इमान्दारीले ३० वर्ष अगाडिनै ठूलो प्रगति गर्छन् यी राशि हुने व्यक्तिले, तपाई पनि पर्नुभयो की ? - Mitho Khabar
June 15, 2022 mithokhabarLeaveaComment on आफ्नै इमान्दारीले ३० वर्ष अगाडिनै ठूलो प्रगति गर्छन् यी राशि हुने व्यक्तिले, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
आर्थिक रुपमा धनि बन्ने सबैको चाहना हुने गर्छ। कर्म गरेपछि फल राम्रो मिल्नेमा कुनै दुई मत रहेको छैन। तर सानो उमेरमानै कोहि धनि बन्न सक्छन् भने केहिले चाहिं धेरै कसरथ र कोसिस पछि मात्र धनि बन्न सक्ने गर्छन्।ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक राशिको फरक व्यवहार साथै भाग्य हुने गर्छ। ३० वर्ष हुनु भन्दा अगाडीनै धनि हुने राशि निम्न उल्लेखित रहेका छन्।
कन्या राशि : यस राशी हुनेहरु आत्‍म सम्‍मान, आत्‍म‍ विश्‍वास र कठोर परिश्रमको कारण छिट्टै छानी बन्ने गर्छन्। आफ्नो हरेक निर्णय सोचेर लिने हुँदा पनि जीवनमा सफल हुने गर्छन् भने व्यवसायमा पनि अब्बल हुने गर्दा कन्या राशि हुनेहरु छिट्टैनै धनि हुन्छन्।
वृष राशि : यस राशिक व्यक्तिहरु शान्त रहने गर्छन् भने आफ्नै तरिकाबाट काम पनि गर्ने गर्छन्। जुनै पनि हदसम्म को परिश्रम गर्ने हुँदा जीवनमा जहिले पनि सफल हुन्छन्।
साथै आफ्नो आर्थिक खर्च नियन्त्रणमा राख्ने मात्र नभई उचित क्षेत्रमा लगानी गर्ने हुँदा पनि छिट्टै धनि हुने गर्छन् वृष राशि हुनेहरु।
धनु राशि : यस राशि हुनेहरु धनको मामलामा छुट्टै मान्यता राख्ने गर्छन्। व्यवसायमा पनि नयाँ तरिका अपनाउने खुबी भएको हुँदा छिट्टै धनि बन्ने गर्छन्। साथै आफ्नो धनको सहि सदुपयोग गर्ने हुँदा पनि धनु राशि भएका व्यक्तिहरु छिटै धनि हुन्छन्।
प्रचण्डको धम्कीपछि प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा छुटिन
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने सरकारको घोषणा
प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरले गरिन गर्ने नहुने काम
May 12, 2022 mithokhabar
काठमाडौं वडा नम्बर २७ र ८ मा बालेन शाहलाई धक्का,केशव स्थापित र सिर्जना अगाडि
May 19, 2022 mithokhabar